Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Minnesota oo ka qayb gashay Munasabad Sanadkiiba marlagu qabto Gobolka Minnesota.
OYSU Minnesota oo ka qayb gashay Munasabad Sanadkiiba marlagu qabto Gobolka Minnesota.
Axad- Ururka midowda dhalinyarada iyo ardayda Ogadenya ee gobolkani Minnesota ayaa maanta kaqayb galay munasaba aad ubaladhan oo gobolkani Minnesota sanadkiiba mar laga xuso. Muasabadan oo lagu magacabo “Mayday” ayaa sanawalba waxaa lagu qabtaaa gobolkani Minnesota ayadoo looga yimado dhamanba gobolada maraykanka.
Munaasabadan oo laisku wacyi galiyo laguna soobandhigo waxyabaha bulshada ku cusub iyo dhaqamada ayaay OYSU nasiib uyeelatay inay soobandhigto barnamijka “I care Campaign’ oo ah barnamij ay dhalinyarada OYSU Minnesota ku wacyigaliso gowmiyadaha ajanibta ah ee ku nool wadankani marayknak xalada dhab ta ah ee ka jirta Ogadenya iyo xasuqa sgacabka Ogadenya loo gaysto..
Hadab ayadoo ay sanadkii horana ay ka qayb galee ayaa waxaa anadkan ay OYSU ku guulaysteen inay dadkii ajanibtaaha ka sixixan “petition” cadsiyo ay OYSU kaga codsanayso dowlada Marayknak in Ethiopia laga joojiyo dhaqalaha ay maraykanku siyan oo loo adeegsodo Shacabka Ogadenya iyo shucubta kale.
Dadka ajanibta ah oo akhrinayan inta ayna saxixin warqadaha kahor ayaa aad u mujinayay inay ka xunyihin in canshurtooda lagu dhibateyo dad shaca ah. dhanka kalana waxay mujieen inay garab taganyihin ooy tagerayan dadalka loogu jiro in shacabka Ogadenya laga hoosbixiyo gumaysiga Ethiopia.